Global Voices teny Malagasy » Misy Tsara Sy Ratsy Ao Anatin’ilay Lalàna Vaovao Mifehy Ny Asa Ao Kiobà · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Jolay 2014 18:41 GMT 1	 · Mpanoratra Elaine Díaz Nandika (fr) i Emmanuelle Marmion, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Kiobà, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Sendikà, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Taorian'ny adihevitra nandritry ny volana maro tao amin'ny Antenimieram-Pirenen'ny Fahefam-Bahoaka, manomboka miditra amin'ny fampiharana azy hanan-kery ilay lalàna vaovao mifehy ny asa,  ao anatinà vanim-potoana iroboroboan'ny sehatra tsy miankina sy ny fanentanana ireo vahiny mpampiasa vola. Niteraka resabe tao amin'ny nosy anefa na izany aza ny fanilikilihana ireo toko sy andininy mifandraika amin'ny fanavahana ny lahy sy ny vavy sy ny fanaovana antsojay.
« Avoitran'ireo gazety ao amin'ny firenena betsaka ny amin'io lalàna vaovao io », hoy ny voamarik'i Camilo García ao amin'ny bilaoginy , « indrindra fa ireo mamepetra ny fifandraisana arak'asa any amin'ireo orinasa tantanan'olon-tsotra, lalàna iray tena ilaina mihitsy manoloana ny firongatry ny fitomboan'izy ireny, izay no ilàna ny fiarovana ireo mpikaràma ».
Manamarika ao amin'ny bilaoginy  i Francisco Rodríguez, mpanao gazety sady mpikatroka mafàna fo amin'ny resaka zo ara-pananahana : 
Isan'ny tetikasa niadiana hevitra tamin'ny Desambra lasa teo tao amin'ny Antenimieram-Pirenena Kiobàna ny ady amin'ny fanavakavahana noho ny fironana ara-pananahana. Nanampy ny resak'reo solombavambahoaka ihany koa ny fahasembanana. Kanefa, tsy noraisina ny tolo-kevitr'i Mariela Castro, ilay solombavambahoaka sady talen'ny Foibem-Pirenena momba ny Fanabeazana Ara-pananahana (Cenesex ), momba ny filàna ny hampidirana ny famantana ny lahy sy ny vavy mba hiarovana ireo olona nanova tavam-pananahana.
Araka ny hevitr'i Rodríguez, « nolavin'ny sekreteran'ny Filankevi-Panjakana fotsiny izao  ny fampidirana ny famantarana ny lahy sy ny vavy ho toy ny anton'ny fanavakavahana, ny sekretera izay, na dia nitsotra ny tsy fahatakarany an'ilay lohahevitra, dia nanohitra ihany ny fandaniana azy ». Manazava i Rodríguez :
Alberto Roque Guerra, mpitsabo ary mitolona ho an'ny zon'ireo vehivavy samy vehivavy mifankatia, ny pelaka, ireo manana taovam-pananahana roa, ireo nanova tavam-pananahana sy olona manambady ny tsy mitovy taova aminy,dia mihevitra ao amin'ny bilaoginy  fa « ireo kiobàna, olona nanova taova, dia sahirana vao tafiditr amin'ny asa ; mihoatra ny famantarana ny lahy sy vavy izay mamaritr azy ireo, manery azy ireo koa io hiseho sy hitondra tena mifanaraka amin'ny famantarana nanasokajiana azy araka ny lalàna ».
Rogelio Díaz, avy amin'ny tranonkala Observatorio Crítico, dia manamarika  ihany koa fa tsy fitaovana mahombymba hiadiana amin'ny fanavakavahana ilay Lalàna, “farafaharatsiny mba any amin'ny sehatra tsy miankina, sehatra ampiasàna sy anararaotana ny filazàna hoe “fiafàran'ny fifandraisana arak'asa” amin-javatra tsotra kely hoe ‘fanapahankevitry ny iray tamin'ireo mpifanaiky”.
Io no hany fomba hahazoana fampanajàna ireo fanapahankevitra nolaniana sy ny sitrapon'ny Antoko Kaominista ao Kiobà , mba tsy hisian'ny olona ho afaka hilaza ho manana zo hampiantso azy ireo na handàny ireofanahìpahankevitra araka izay iiavany azy na araka ny fetra ara-kolotoraly ananany na karazany hafa koa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/07/07/61507/
 lalàna vaovao mifehy ny asa,: http://www.gacetaoficial.cu/pdf/GO_X_029_2014.rar
 hoy ny voamarik'i Camilo García ao amin'ny bilaoginy: http://k1000g.blogspot.fr/2014/06/primera-ley-en-cuba-que-protege.html?spref=tw
 Manamarika ao amin'ny bilaoginy: http://paquitoeldecuba.com/2014/06/18/escamotean-voluntad-del-parlamento-en-nueva-ley-laboral/
 nolavin'ny sekreteran'ny Filankevi-Panjakana fotsiny izao: http://paquitoeldecuba.com/2014/01/03/la-intervencion-de-homero-acosta-o-desmontando-los-prejuicios-del-poder/
 mihevitra ao amin'ny bilaoginy: http://aroqueg.blogspot.fr/2014/06/letra-y-espiritu-de-la-ley-codigo-de.html
 Rogelio Díaz, avy amin'ny tranonkala Observatorio Crítico, dia manamarika: http://observatoriocriticocuba.org/2014/06/19/el-codigo-de-trabajo-capitalista-ya-es-una-realidad-en-cuba/